cadnaan1's Content - Page 33 - Somali Forum - Somalia Online
wadaan xageey martaa teeda kale dhismooyinka wadada mudo ayey socdaan sawiro badana lagama hayo,,wadada isku airportka iyo km4 ayadana dhagaxaan ayaa lagu jaray oo shaqo lagama qaban karo.
sawiradan waa jaamacada banaadir oo ku taala duleedka xamar dhinaca afgooye xigta.waxaana sawirada laga soo qaaday maanta oo arday ku dhaw kun arday ay imtixaanaadka u fadhiisteen.
Dad buu aad dhibayaa heshiiskan ilaahow fidna wadataasha Somalia ka qabo already negative mind ayey kala horyimaadeen heshiiska. Kulahaa conflict postponed walee faroole iyo tolkiisa tacsi ayaa u taala maanta
cadnaan1 replied to xiinfaniin's topic in Politics
cadnaan1 replied to nuune's topic in General
Kii dilay shaqaalaha MSF waxaa cafis. Ku sii daayey madaxweynihio hore sheikh shariif waqtigii doorashada oo beesha ninkaasi ka dhashay ugu balan qaadeen codkooda hadii sii daayo ninkaas.
MMA kuwan marshabiyeeriga dhistay dan ayaa ku qasabtay oo ah xaga amaanka inkaar qabayaasha qaraxyada meelaha dhiga iyo baabuurta qaraxyada ayey iskaga difaacayaan, waana hubaa hadii baahidaas dhamaato inay ayaga dhulkaas soo celin doonaan.
Arintan waa cunaqabateen lagu hayo beelaha Taleex iyo Goldogob waana inay ka hadlaan arintan ,,,Arinta kale dowlada waa inay markabkaas u leexiso dekeda Hobyo halkaasnav loogu sii gudbiyo degaanka goldogob.
cadnaan1 replied to Cambuulo iyo bun's topic in Politics
First time in 22 years,the beautiful blue Somali flag is flying over Hargeisa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ditoore osmaneey,, reer muqdisho ma ahan dad reer cuqdad ah meeshi ay dantooda ku jirto way dagayaan idiinka laakiin wax walba ookiyaale qabiil ayaad ku fiirisaan.
waa shaqsi somaliyed oo caruurtiisa soo booqanaya dhibka ay leedahay maxay tahay.
Tarsan oo la xaqiijiyey in shaqada laga qaaday.
waraa ******* websiteka jowhar wuxuu soo qoro waa war la hubo.
Ilo wareedyo muhiim ayaa u xaqiijiyay Jowhar.com in la dhameystiray qorshayaashii xilka ka qaadista ee Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Tarsan oo muddo saddex sano xilkan hayay. Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga C/kariin Xuseen Guuleed ayaa qeyb ka ahaa Qorshahan xil ka qaadista Mr Tarsan oo dhowaan la sheegay inay isku dhaceen, kadib markii uu dib u soo magacaabay nin uu horay Tarsan xilka ka qaaday. Sida ay sheegayaan wararka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo gaba gabeeyay la tashiyo ku saabsanaa magacaabista Duqa Muqdisho iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, iyadoo uu ugu cad cad yahay xubnaha xilkaas loo magacaabayo Jen. Xasan Maxamed Xuseen oo loo yaqaano Mungaab. Warkan aan ka helnay ilaha lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in maalmaha soo socda laga yaabo in lagu dhawaaqo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Duqa Muqdisho Jen. Mungaab oo hada haya xilka Gudoomiyaha Maxkamada sare ee Ciidamada qalabka sida. Jen. Mungaab oo ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha Mudullood ayaa in muddo ah u xusul duubayay xilka Maamulka Gobolka, iyadoo beelaha Mudullood ay wadeen dadaalada la xiriiray sidii xilkaas loogu magacaabi lahaa. Kulamo hoose oo ka dhacay Madaxtooyada ayaa dhex maray Madaxweynaha Soomaaliya iyo beesha uu ka soo jeedo Mr Mungaab, kaasoo la sheegay in Madaxweynuhu ugu xaqiijiyay in xilkaas uu u magacaabayo. Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in Mr Mungaab loo gacan geliyay waraaqdiisa magacaabista, hase ahaatee aan wali la shaacin, waxaana arrintan xalay aad looga hadal hayay mid ka mid ah Hotelada Muqdisho oo dad siyaasiyiin, saraakiil iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay ku sheekeysanayeen wararka ku saabsan magacaabista aan wali la shaacin. Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) ayaa xilka Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho loo magacaabay bartamihii sanadkii 2010, xilligaasoo magaalada Muqdisho inteeda badan maamulayeen Al-Shabaab, iyadoo mudadii uu xilka hayay uu wax badan ka qabtay xaalada Muqdisho, gaar bilicda Muqdisho. Jen. Xasan Maxamed Xuseen (Mungaab) ayaa ka mid ahaa ardayadii ku soo waxbaratay dalka Sudan, waxaana Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo ay isku dhowaayeen u magacaabay Gudoomiyaha Maxkamada ciidamada qalabka sida. Somali news leader www.jowhar.com golfyare@gmail.com jowharcom@hotmail.com
muqdisho port oo mardhaw balaarin iyo qeybo cusub lagu soo kordhin doono.
koofi wuxuu ahaa maxaakiimta garabka sheikh shariif ee marna ma noqonin alshabaab markii sheikh shariif yimidna wuxuu la saftay sheikh shariif,,,sawirkana wuxuu ahaa sanadki 2007/2008 waagi ethiopianka xamar lagula dagaalami jiray. Cambuulo iyo bun;971130 wrote: I dont understand how a shabaab Sarkaal can become taliyaha nabad-sugidda :mad:. walahi we're doomed nobody had a better chance than culusoow yet he has ruined that chance in less than a year what a complete wasteman! for all you who doesn't know who Maxamed Aden koofi (the new taliye) is here is a picture of him sitting next to Mukhtar roobow Abu Mansuur
cadnaan1 replied to Safferz's topic in General
woww what a picture just perfect to look at everyday.,,geedkan oo kale somalia ma ka baxaa.
Erdogan: Kooxahan isku sheegay Muslimka Maxay ku weerareen Dadka Walaalahooda Caawinaya?
cadnaan1 replied to MoonLight1's topic in Politics
turkida ma ahan sidii reer galbeedka oo kale hadii dhawr qof laga dilo iska cararaya,,turkida ayagaba argagixiso way soo arkeen oo sii fiican ayey u yaqaanaan waxaasi cabsi galinmayso,,somaliyana dan fog ayey ka leeyihiin oo si fudud ku bixi maayaan.
mashruuci dib u dhiska wadooyinka xamar oo bilawday.
Horta yaa arkay the actual document lagu saxiixay shirkii turkiga ka dhacay maxaase shacabka looga qarinayaa. Ilaa iyo hada ma hayno cadeen wixii la saxiixay. Waxaa macquul ah inuu wasiirku saxsanyahay .
Can you name who these leaders are?
Kan dhexda ka taagan king husein of Jordan iyo sadaam husein yaa waaye kaas wuxuu u ekyahay mafia
Shirkad joojisey shidaal ay ka baareysay Jubbada Hoose
lol qof xanaaqsan oo comment usoo qoray websiteka newska soo daabacay,, waxaan u malaynayaan qofkan waa reer SOL. 2 Responses for “Shirkad Joojisey shidaal ka baaraysay Jubbada Hoose” goobwayn says: July 17, 2013 at 9:26 am kadib salaan waxaan lahadlayaa kismaayo news markaad ufiirsato qoraalkiina waxaad moodaa inay qoreen dadkii xamar kasoo weeraraayay jubbaland waliba waxuu u egyahay inaad garab siinayso dadkii cadawga ahaayee jubbaland burburinaayay dacaayada hoodii aadbaana u necbaystay qoraalkaaga waxaan dhihi lahaa soomaalia wax dhexdhexaad layiraahdo kama jiro haba lasiikala daraadee marka adi maxaa kuu diiday inaad sheegto waxii jubbaland u fiican ,warkan kasaar meesha . Reply goobwayn says: July 17, 2013 at 9:31 am walaal xataa hadduu run yahay waa mid aan loo baahnayn this time anugu waxaan u arkaa haddii gaas laga hello inuu yahay subag xeedho ku daaatay sina kuma xuma haduu soomaalia yeelato waa kaygii haddii kenya yeelaana waa kaygii marka adugu maba tihid dadkii dacaayada fidin lahaa iga raali ahaw waaaniga fikirkaygee haddaad dhibsato Reply
http://kismaayonews.com/2013/07/17/shirkad-joojisey-shidaal-ay-ka-baareysay-jubbada-hoose/ http://kismaayood.com/?p=12720 Shirkad laga leeyahay dalka Kenya oo qandaraas shidaal baaris ah la gashay dowladda Kenya taasi oo lagu magacaabo Statoil ayaa joojisey hawlo shidaal baaris ahaa oo ay ka waday ceel ku yaala badda gobolka Jubbada Hoose, halkaasi oo ay sheeganayso dowladda Kenya. Xogtani waxa ay ku jirtey warbixin guddiga Qaramada Midoobey ee kormeerka cunaqabataynta Hubka ee Soomaaliya taasi oo loo gudbiyey golaha amaanka ee Qaramada Midoobey. Warbixinta ayaa lagu sheegey in shirkadda Statoil ay Kenya u sheegtey in aysan dooneynin in uu qarash kaga boxo dhul la’isku heysto lahaanshiyihiisa, islamarkaasina Soomaaliya leedahay, waxayna Kenya ka dalabtay in marka hore ay Soomaaliya ku kala baxaan dhulka uu ceelka ku yaalo. Ceelka waxaa lagu magacaabaa ama astaantiisa aqoonsiga ay tahay L26, wuxuuna ka midyahay illaa 5 ceel oo dhaca dhul badeedka Soomaaliya oo ay Kenya sheeganayso. Sargaal ka tirsan dowladda Kenya ayaa gudiga u sheegey in shirkadda Norway ay danaynayso in ay shidaalka soo saarto haddii lagu heshiiyo dhul badeedka. Norway ayaa waxa ay aad ugu ololeyneysaa in dhul badeedka Soomaaliya lagu soo koobo 12 mile oo kaliya, si inta ka taloowsan cabirkaasi ay shirkadaheeda shidaal oga baaran karaan si dhib yar, waxaa kale oo ay dowladda Federaalka ku riixeysaa in ay Kenya u fasaxdo in ay la wareegto dhul badeedka la’isku hayo. Arrintani waxa ay marqaati ka tahay danaha dhabta ah ee ay Kenya ka leedahay goboladda Jubbooyinka iyo danta ugu jirta mashruuca Jubbaland, waloow dadka ku kala aragti duwanyihiin, islamarkaasina aanan si rasmi ah loo ogeyn danta rasmiga ah ee dadka deegaanka Jubbooyinka ugu jiri karta haddii ceelashaasi shidaalka ay Kenya la wareegto. Si kastaba, kani waa moowduuc xasaasi ah oo oo madaxda Jubbaland iyo dad badan oo taageersan aysan ogoleyn in laga hadlo. Warbixinta Qaramada Midoobey waxa ay dhanka kale walwal xooggan ka muujisey in shirkadaha reer galbeedka ee shidaalka ka baaraya Soomaaliya ay horseedi karaan shaqaaqo cusub iyo dagaalo hor leh oo ka dhaca geeska Afrika, waxaa farta si gaar ah loogu fiiqey dowladaha Norway iyo Sweden iyo waliba Canada oo Soomaaliya ka leh dano shidaal. Kismaayood.com